Fujita scale: ihe ọ bụ, njirimara na mkpa | Network Meteorology
Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, dịka e nwere ọ̀tụ̀tụ̀ iji tụọ ajọ ifufe na ala ọma jijiji, enwekwara otu ọ̀tụ̀tụ̀ iji tụọ ịdị ike nke a tonado. A maara ọkwa a Fujita n'ọtụtụ. Ọ bụ a ọnụ ọgụgụ na-anọchi anya etoju nke ike na ikike imebi emebi oké ifufe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile na mkpa nke Fujita.
1 Gịnị bụ tonado
2 Fujita n'ọtụtụ
3 Akụkụ nke Fujita
4 Ọkwa dị mma
Gịnị bụ tonado
Nke mbu, anyi aghaghi imata ihe tonado bu na ihe eji mara ya. A tonado bụ uka nke ikuku na-etolite na oke angular na-agba ọsọ. Njedebe nke oke ikuku mmiri dị n'etiti elu nke ụwa na igwe ojii cumulonimbus. Ọ bụ ihe ikuku ikuku nke ikuku na nnukwu ume, ọ bụ ezie na ha na-ewe obere oge.
Oke mmiri ozuzo a na-etolite nwere ike inwe nha na ụdị dị iche iche na oge ha na-agakarị gburugburu n’agbata sekọnd ole na ole na ihe karịrị otu elekere. Kacha mara mara tonado morphology bụ foneji igwe ojii, nke njedebe ya dị warara na-emetụ ala ma igwe ojii na-ejikarị ya na-adọta uzuzu niile na irighiri ihe gbara ya gburugburu.
Ọsọ ọsọ nke oke ebili mmiri nwere ike iru bụ n'etiti 65 na 180 km / h ma nwee ike ịbụ mita 75 n’obosara. Tornado anaghị anọ ọdụ ebe e guzobere ha, kama ọ gafere ókèala ahụ. Ha na-agakarị njem ruo ọtụtụ kilomita tupu ha apụ n'anya.
Ihe kachasị njọ nwere ike ịnwe ifufe na ọsọ ọsọ nwere ike ịtụgharị na 450 km / h ma ọ bụ karịa, jiri ihe dị ka kilomita 2 n'obosara ma nọgide na-emetụ ala maka ihe karịrị 100 kilomita nke ụzọ.
Ozugbo anyi matara ihe bu oke mmiri ozuzo, anyi na-ahuta na eji Fujita mee ihe iji mata etu oke ikuku mmiri ozuzo a di. Ọ bụ ọnụọgụ nke na-ahụ maka ịkọwa oke mmiri ozuzo dịka oke dabere na mmebi ha nwere ike ibute. Emepụtara ọnụ ọgụgụ a na 1971 site n'aka onye nyocha North America Tetsuya Theodore Fujita, onye nyocha ihu igwe na mmekorita ya na Allan Pearson, Center for Storm Prediction (amụma amụma oke ifufe) na United States. Ndị sayensị na ihu igwe nabatara ya ozugbo.
Ogo Fujita na-anwa iguzobe ike ikuku na ikike imebi ihe. Ka anyị lee ihe bụ isi ihe dị iche iche oke ikuku a nwere:
Ike ikuku F0: Ọ bụ akụkụ nke ọnụ ọgụgụ na-akọwa ịdị adị nke ikuku ọsọ n'etiti 60-120km / h. N'ebe a, mmebi ahụrụ bụ mmebi nke alaka, nrụrụ nke akara ngosi okporo ụzọ, antennas telivishọn gbagọrọ agbagọ, wdg. Ha bụ obere mmebi nke na-anaghị akpata nnukwu nsogbu.
Ike ikuku F1: Ha bụ oke ifufe na-agba ọsọ n'etiti 120-180 km / h. Imebi emebi dịka itele taịlịkị, okpokoro ụgbọala na-adọkpụ, ụgbọala ndị mebiri emebi, wdg.
Ike ikuku F2: Ndị a bụ ifufe nwere ọsọ ọsọ n'etiti 180 na 250 km / h. Site na ikuku a, anyị na-ahụ na mmebi nke na-eme bụ mmebi nke mgbidi na elu ụlọ.
Ike ikuku F3: bụ ike ahụ na-eburu ifufe na ọsọ ọsọ n'etiti 250 na 330 km / h. Site na ikuku ifufe a, anyị na-ahụ na enwere mmebi nke a pụrụ ịhụ, dị ka ngụkọta nke mgbidi na elu ụlọ, oke ọhịa kpamkpam, wdg. N'okwu ndị a, anyị nwere ike ịhụ mgbidi na elu ụlọ ndị ahụ na-efe n'ihi oke ikuku nke ifufe.
Ike ikuku F4: kwekọrọ na ọsọ ikuku n'etiti 330 ruo 420 km / h. N'ebe a, anyị na-ahụ mmebi ka njọ nke mepụtara dịka ụlọ na enweghị ntọala na ụgbọ ala kwaturu kpamkpam. Ike nke oke ifufe ndị a na-echegbu onwe ha ebe ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ.
Ike ikuku F5: kwekọrọ na oke ikuku kachasị oke na ụkpụrụ sitere na 420 ruo 510 km / h. Ihe mmebi ahụ kpatara bụ ụlọ bibiri kpamkpam, ụgbọ oloko ndị ọzọ gbapụrụ, wdg. Ọ bụ ọkwa kachasị elu na Fujita n'ọtụtụ na-echegbu onwe ya.
Akụkụ nke Fujita
A ghaghị iburu akụkụ ụfọdụ nke ọnụ ọgụgụ nke oké ifufe a n'uche, dịka na ọ naghị elebara ogo nke iwu nke ụlọ ndị mebiri emebi anya. Na mgbe otu akụkụ dị mkpa ị ga-eburu n'uche ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ụlọ nwere ala ebe ọ bụ na ha emeela agadi ma ọ bụ jiri ihe dị ọnụ ala rụọ ya. N'okwu ndị a, a gaghị atụle ike nke oke ikuku dị ka ọrụ nke ikike mbibi ya na otu ziri ezi.
Enwere otutu omumu nke gosiputara na na Fujita ọnụ ọgụgụ overestimates ifufe ọsọ edemede 3, F4 na F5. Nke a bụ n'ihi na anaghị echebara ogo nke ihe ụlọ ndị adọkapụrụ agbaji n'oge elekere. Ya mere, enwere ụdị nke ka mma nke ọnụ ọgụgụ a nke US National Weather Service kere na 2006 ma ugbu a dabere na ihe ngosi mmebi 28, na-eburu n'uche ụdị ụlọ ma ọ bụ akụkụ. Ọdịmma Fujita na-arụ ọrụ ma ọ bụ EF (Enhance Fujita) bụ ọnụ ọgụgụ maka ike nke oke ifufe n'ihi mmebi kpatara. Ejiri ya na United States kemgbe oge okpomọkụ nke 2007.
Ọkwa dị mma
Ka anyị lee ihe dị iche iche a na-enyocha na ọkwa Fujita dị mma:
EF0 : Akụkụ ụfọdụ ewepụrụ ụlọ (taịl nile, taịl nile), gutters, chimneys na siding mebiri emebi.
EF1 : E wepụrụ ihe ndị dị n'elu ụlọ kpam kpam, wepụ mpụga ụzọ, windo agbajiri.
EF2 : Ulo elu ha fụrụ afụ n’elu ụlọ ndị siri ike, ụlọ bibiri kpamkpam, nnukwu osisi tiwara ma ọ bụ efopụ.
EF3: Ala nke ụlọ ndị e bibiri emebi, ụgbọ oloko kwaturu, osisi ndị nwere ọkpọka, bulie ụgbọala.
EF4 - houseslọ ndị e wuru nke ọma ma na-agba ụgbọ ala, ọtụtụ ihe na-aghọ ihe agha.
EF5: A na-araba ụlọ ndị siri ike mmiri na-eburu na ihe ndị dị ka ụgbọ ala n'ikuku.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Fujita na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Fujita n'ọtụtụ
Oke osimiri Coral